HFE fiarovana sy fihanaky ny harena an-kibon'ny tany China Manufacturer
Description:Fiarovana mafy ho an'ny tontolo iainana,HFE fanasan-damba ho an'ny fiarovana mafy,HFE fiantohana sy ny fanadiovana ny tontolo iainana
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny fiarovana mafy > HFE fiarovana sy fihanaky ny harena an-kibon&#39;ny tany
HFE fiarovana sy fihanaky ny harena an-kibon'ny tany
Non-volatile residues:: <1ppm
Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo lenta amin'ny dielectric, ny tebiteby ambany dia ambany, ny hodi-jiro ambany, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fialana ary ny fahamendrehana tsara. Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy, ny solika, ny LCD ary ny sarotra sns., ary azo ampiasaina ihany koa mba handotoana sy handotoana, fanandramana amin'ny fanodinana elektronika na fisedrana amin'ny rivotra, ary solvent.
Ireo toetra mampiavaka ny vahaolana amin'ny fikolokoloana:
1.HFE tebiteby be sy tebiteby, ary mety hiparitaka mivoaka sy miparitaka amin'ny rihana sy ny fonosana isan-karazany, ary misy fiantraikany tsara amin'ny famonoana, fanasiana, famafazana sy fanadiovana;
2. Fialana amin'ny alàlan'ny herinaratra, ary afaka diovina amin'ny elanelana, ary afaka manatsara ny toerana ampiasaina;
3. Manana tady mahamay (54 ℃), ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany, ary afaka milalao anjara amin'ny fikorianan-tsakafo mandritra ny fandroana sy fanadiovana. tsy mampidi-doza zavatra , tsy mirehitra ary tsy misy pesta, tsy misy afo na teboka teboka;
4. Hydrofluoroether Fitetezana tsara, mora vetaveta tsy misy miala, ary afaka mitana andraikitra tsara amin'ny fitsaboana ny fidiovana;
5.Hydrofluoroether Clean Agent dia tsy misy poizina sy tsy mampidi-doza ary tsy manelingelina;
6. HFE hydrofluoroether fanadio ny tontolo manodidina ny tontolo iainana, manana ODP ny sandan'ny 0 sy ny ambany ambany GWP ambany;
Ranon-javatra fanadiovana 7.The rehefa azo amboarina amin'ny alalan'ny distilling hoe: Izao no hampihena fatiantoka , fandaniana ny fandaniana.
Famaranana ny vahaolana amin'ny fikolokoloana fiarovana matihanina:
Mampangotraka mahamay amin'ny fampiasana fiarovana mafy
Ity vokatra ity dia fitambaran'ny Hydrofluoroether. Ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana izany, izay sady tsy misy loko no sady tsy misy poizina ary tsy mampidi-doza , ary mitoka-monina. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra izy io, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy samihafa, ny semiconductor, ny LCD ary sarotra disk etc., ary azo ampiasaina koa mba handotoana ary fanadiovana , fanandramana fitetezana elektronika na fitiliana fohy, ary solvent.
Fanadiovana Sakafo, fitehirizana ary fitaterana:
Ity vokatra ity dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny mpanjifan-tsakafo, mora voatahiry ary
Product Categories : Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an'ny fiarovana mafy
HFE fiarovana sy fihanaky ny harena an-kibon'ny tany Contact Now
Hexafluoropropyl methyl ether fanadiovana ho an'ny fiarovana mafy Contact Now
HFE tsy misy poizina sy tsy fahampian-tsakafo ho an'ny harona sarotra Contact Now
HFE Environmentally-friendly cleaner amin'ny fiarovana mafy Contact Now
Ny vovo-tseraseran'ny tebiteby isaky ny tebiteby Contact Now
HFE fitaovana fanadiovana elektrônika tsara ho an'ny harona sarotra Contact Now
Toe-jiro mahazatra 54 ℃ fanadiovana matevina Contact Now
HFE mora volatility tsy misy mivalan-tsakafo ho an'ny harilova sarotra Contact Now
Fiarovana mafy ho an'ny tontolo iainana HFE fanasan-damba ho an'ny fiarovana mafy HFE fiantohana sy ny fanadiovana ny tontolo iainana